Ukuzizwa usekhaya e-Airbnb
Ukukwenza uzizwe usekhaya kusemqoka kithi
Akukho ukuzizwa usekhaya ngaphandle kokuhluka nokungabandlululi. Ukwenza umhlaba lapho abantu bangazizwa besekhaya khona kufanele sithathe izinyathelo zangempela ukwakha indawo yokusebenzela lapho wonke umuntu ezizwa amukelekile khona futhi wonke amazwi elalelwa.
Ubulili Emhlabeni wonke ku-Airbnb
Ubulili baseMelika ku-Airbnb
Uhlanga lwase-US kanye nobuhlanga e-Airbnb
Landa Umbiko Wemininingwane Yomqashi (2017)
Landa Umbiko Wemininingwane Yomqashi (2018)
Ubuholi buchazwa wukuba ezingenzi elingu-11 noma ngaphezulu, okungenani onombiko owodwa oqondile, ongeyena owesikhashana, usankontileka noma osafundela umsebenzi.** Ubuchwepheshe buchazwa njengoBunjiniyela, uMkhiqizo, Umklamo, Isayensi Yedatha (Ukuhlaziya) kanye namaqembu Ezobuchwepheshe Bolwazi. Akuhlanganisi Abasizi babaphathi kanye Nabaxhumanisi bamaThimba.** UbuNjiniyela buhlanganisa wonke umuntu ngaphakathi kwenhlangano yethu yobuNjiniyela. Akuhlanganisi Abasizi babaphathi kanye Nabaxhumanisi bamaThimba.**
I-Able@ iyiqembu labasebenzi abonokukhubazeka okwehlukene, okubonakalayo, okungabonakali, kanye nokunye, kanye nabalingani bethu. I-Able@ iklanyelwe ukuthuthuisa nokunika amandla amalungu ngenkathi ehlanganyela emikhankasweni yokukhuthaza ukuqwashisa nokuthuthukisa izindawo zokuhlala zezidingo zethu ezihlukile.
I-AirPride@ ihlangana njalo ngenhloso yokugcina i-Airbnb iyindawo emangalisayo yabantu base-LGBTQ yokusebenzela. Sihlela imicimbi yezenhlalakahle, imizamo yokuvolontiya ye-LGBTQ, futhi sisebenze ukufundisa ihhovisi elikhulu ngokusebenzisa imicimbi efana ne-Pride kanye namaphaneli wokufundisa angaphakathi.
I-Asians@ inhlanganisa i-Asian and Pacific Island (API) Amaqembu Abantu Namasiko anikeza nethuba lokusekela nokukhuthaza. Sizama ukuqikelela ukuthi wonke amalungu azizwa esekhaya e-Airbnb, kokubili ngaphakathi kwenkampani kanye nasemphakathi wethu WoMhlaba wonke Wababungazi Nezivakashi.
I-Black@ iyaqikelela ukuthi wonke amalungu ajabulela umuzwa wokuzizwa usekhaya kuyi-Airbnb. Sinikeza indawo yokuhlangana ephephile kubasebenzi Abansundu nabasebenzisana nabo ukuze baxoxe ngokuhlukahluka ngokobuhlanga nokuhlukumezeka ekuqashweni, ekugcinweni nasekuzikhandleni komphakathi e-Airbnb.
I-Foreignairs@ igubha izizinda ezihlukahlukene zabasebenzi base-Airbnb. Siyabamukela abafuduki nabahlali bendawo emiphakathini yethu wezisebenzi ukuhlanganyela ndawonye futhi wabelane ngezinto ezenzekayo, izinsiza, kanye nemibono yomhlaba wonke yokuzizwa usekhaya noma ngabe kuphi.
Juntos podemos! I-Juntos@ igubha ukufana nokuhlukahluka kwamasiko ethu. Silwela ukufundisa, ukuphakamisa, nokusekela imiphakathi yethu yaseLatinx ngemicimbi yokuzithandela, ama-fiestas, izinkulumo, namathuba okufinyelela abantu.
I-Natives@ yenzelwe ukunikeza bonke abantu Bomdabu, Abomdabu baseMelika, amalungu eZizwe Zokuqala, ama-Inuit, nama-Aboriginal izwi elizwakalayo emphakathini we-Airbnb. Sigcina amasiko ethu ephila ngokugqugquzela nokuqwashisa ukugujwa komkhosi, okukhuthaza ukuziqhenya kwabo bonke abagubha leli siko.
I-Nerdettes@ eyabesifazane kwezobunjiniyela, isayensi yedatha ne-ITX! Sibungaza imihlangano evamile yokuhlanganyela nokokuzithokozisa kwethu futhi sisekelane ekususeni izithiyo ukuze wonke umuntu aphumelele. Yiba nathi njalo ngenyanga esidlweni sasemini bese uzethula emphakathini!
I-Parents@ iqembu elisekelanayo labasebenzi abanezingane, abazinikele ekwakheni isiko elinempilo kubazali nemindeni yabo. Sihlanganyela ndawonye izinsiza zokunakekela izingane, imfundo, ukuba umzali, ukuhamba nezingane, ukubuyela emsebenzini emva kokuzala umntwana nokunye.
I-Tribe@ yaqala njengeqembu kunoma ubani onentshisekelo ngempilo yamaJuda nakumasiko e-Airbnb, futhi iye yanda yaba yindawo lapho bonke behlanganyela ngamasiko abo kanye nobunhlanga kanye nomphakathi wabasebenzi base-Airbnb. Sihlangana ukuze sihlanganyele izinsiza kanye nokokuzizwela, futhi sigubhe izinto ezibalulekile kanye nokufeziwe!
I-Veterans@ ijabulela iminikelo nokuzidela komakadebona bensizakalo ye-Armed Forces. Sisekela imibuthano yomakadebona eseduze nasemphakathini womhlaba jikelele, kuhlanganise nokuqashwa komakadebona kwi-Airbnb nokusekela imindeni yezempi, amalungu akhubazekile / alimele nomakadebona.
Iqembu le-Women@ Airfinity liyindawo ephephile kubo bonke abesifazane e-Airbnb nalabo ababasekelayo. Sizinikezele ekugcineni umphakathi ovulekile wezingxoxo mayelana nezinselele ezibhekene nabesifazane kwezobuchwepheshe, amathuba okuqeqeshwa kanye nokusekelwa kobuholi e-Airbnb.
Ukuzibophezela Kwenkokhelo Elinganayo kwase-White House
Sithathe isibambiso sokuqaphela nokugqugquzela imikhuba emihle ehlose ukuvala igebe lomholo kazwelonke, kuqalisa emahhovisi ethu.
Ukuzibophezela Kokungabandlululi kwe-White House Tech
Sithatha isinyathelo sokwenza abasebenzi bethu babaqonde ngokugcwele abantu baseMelika, ngokusebenzisa izinyathelo ezisheshayo nezesikhathi eside.
Sikholelwa emandleni emibono ehlukahlukene emsebenzini, futhi sibelana ngezindlela amaqembu ethu ezinikele ngayo ekuhloleni izindlela zethu.
I-HRC Inkampani Yokulingana Kwezinkampani
Siyaziqhenya ngokusekela umsebenzi weMkhankaso Wamalungelo Abantu, futhi sikhethwe 'Njengendawo Engcono Kakhulu Yokusebenzela ye-LGBT Equality', sathola u-100% kwi-Index yabo Yokulingana ka-2016.
Ukwabelana Ngovo Lwabafundi
Umphakathi wethu uyimpahla eyigugu kithi. Siveza izinqubo zethu zokuqasha nezengxoxo yokuthola umsebenzi ngoba ukwabelana ngemininingwane kubalulekile ukuze uthuthuke.
Uhlelo lwe-Airbnb Connect
Ukuhlukahluka kuqinisa amaqembu ethu kanye nemikhiqizo abayakhayo. Abalingani be-Airbnb Connect abangenzi inzuzo ukukhulisa ukuqashwa kwamaqembu angamelelwe kwezobuchwepheshe.